तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको पहिलो तिथि आनन्द उठाउन कसरी
द्वारा Catherine Monreal
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 15 2021 |2मिनेट पढ्न
धेरै पटक नयाँ जोडे आफ्नो पहिलो तारीख overthink. तिनीहरूले संभावित हुन सक्छ को बारे मा उनको टाउको मा विभिन्न परिदृश्य खेल्न र तिनीहरूले वास्तवमा सँगै खाएका छन् अघि एक उन्माद मा आफूलाई काम. अन्य व्यक्ति चिन्नुको को मुख्य विचार वा छैन तिनीहरूले राम्रो छाप गर्दै बारेमा चिन्ता गर्न एक फिर्ता बसेपछि – तिनीहरूले अनुहार पनि धेरै छोएर छन्, धेरै कुरा, पर्याप्त कुरा छैन, र मा र मा.
तिनीहरूले भनिरहेका छन् के पहिलो मिति अन्य व्यक्ति चिन्नुको कुरा सुनेर र स्वीकारिरहेका को एक समय हुनुपर्छ. तपाईं कसरी माथि जाँदैछन् अन्य व्यक्ति सुन्न सक्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ जाँदैछन् र तिमी के गर्दै छन् या त्यो या त्यो कुरा छ, जबकि गर्दै छन्? तपाईं यो सोच्न भने, तपाईं वास्तवमा आफ्नो समय आफैलाई ध्यान केन्द्रित खर्च र मुख्य ध्यान अन्य व्यक्ति हुनुपर्छ भूल हो. तपाईं आफैलाई सबै दिन खर्च; आफैलाई एक तोड दिनु र अरू कसैसित समय खर्च.
त्यसैले, तपाईं आफ्नो टाउको बाहिर प्राप्त र वर्तमान क्षण ध्यान दिनुपर्छ. उहाँले तिमीहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि के भनिरहेको छ? त्यो तपाईं अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ कि के गर्दै छ? अर्को राम्रो विचार यस आफ्नो पहिलो मिति पनि छ कि सम्झना छ, र उहाँले तपाईंलाई सबै भन्दा अधिक संभावना जस्तै भयातुर छ. उहाँले तपाईंलाई लागि ढोका खोल्न बिर्सनु भयो? अथवा आफ्नो कुर्सी बाहिर तान्न छैन? त्यो सिर्फ प्रश्न आफु को बारे मा कुरा र तपाईं सोधेर छैन जस्तो देखिन्छ गर्छ? तपाईं दृष्टिकोणबाट यी उदाहरणहरु देख्दा अन्य व्यक्ति पनि भयातुर छ कि, यो जाऔं र रात को बाँकी नेतृत्व सक्छ जहाँ बुझ्न सजिलो भएको छ.
तपाईं खराब सास बारे मा परेशान हो भने, आफ्नो थैली वा खल्तीमा केही टकसालों राख्न. यो केही Kleenex वा साथै तपाईं संग एक रूमाल छ राम्रो हुनेछ. तपाईं सारा दबाइ कैबिनेट ल्याउन आवश्यक छैन, तर तपाईं वा तपाईं नजिक संग केहि कुरा भएको सजिलो महसुस अधिक तपाईं राख्न मदत गर्नेछ.
यो सबै गर्न मुख्य बुँदा आफ्नो मिति मजा र तिनको कम्पनी को आनंद ले समय बिताउन छ. जीवन हुन्छ र कहिलेकाहीं कुराहरू रूपमा योजना जान छैन. तपाईं एक खुले मन राखन भने (र हृदय) तपाईं हुन्छ जो संग रोल गर्न सक्छन्. यो धेरै को पहिलो तारीख हुन सक्छ. आराम र आनंद!